အချိန်ကောင်းအခါကောင်း တို့မြန်မာတွေဘာလုပ်ကြမလဲ … | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » အချိန်ကောင်းအခါကောင်း တို့မြန်မာတွေဘာလုပ်ကြမလဲ …
အချိန်ကောင်းအခါကောင်း တို့မြန်မာတွေဘာလုပ်ကြမလဲ …
Posted by fatty on Jan 16, 2012 in Creative Writing, Drama, Essays.. | 17 comments
တိုင်းရင်းသားများနှင့် သဘောတူညီချက်စာချုပ်များလည်း လုပ်သင့်သလောက်လုပ်ပြီးနေပါပြီ။
အဆင်းရဲ့ဆုံးနိုင်ငံအဖြစ်မှ လွတ်ကင်းအောင် လုပ်ကြရပါလိမ့်မည် …။ ဆိုရသော်
၇င်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများဝင်ရောက်လာရေးတွင် ၁၉၈၈ အပြီးက သင်ခန်းစာပြန်ယူဖို့သင့်လှသည်။
ထိုစဉ်က တိုင်းပြည်တခါးဖွင်းတယ်ဟေ့ဆိုတာနှင့် အကြံအဖန်သမားတို့ကအရင်ဝင်လာကြသည်။
မြန်မာနိုင်ငံသို့တခေါက်ပြန်ဝင်လာလျှင်ဒေါ်လာ ၅၀၀၀၀ ပါလာသည်။
လေဆိပ်တွင် တပုလင်းပေးပြီး ၅၀၀၀၀ ပါလာကြောင်းစာရွက်ပေါ်တံဆိပ်တုံးထုခိုင်းသည်
သို့ဖြင့်မြန်မာမာပြည်ကပွဲစားများနှင့် နိုင်ငံခြားမှပွဲစားများပေါင်းကာ ပြည်တွင်းမှရှာလို့ရသည့်
ကျပ်ငွေများကို ဒေါ်လာဝယ်ကာ နိုင်ငံခြားသို့ပြန်ပို့၏
သူများနိုင်ငံကကား ဖြုတ်ထုတ် ပြန်တတ်ပြီးစက်မှုဇုန်ထုတ်ဆိုပြီးရောင်း၏
ဆိုလိုသည်မှာ အချိန်ကောင်းပင်ဖြစ်ပါသည် ……။
မှန်ကန်တဲ့ စီးပွားရေး မူဝါဒတွေကို သေသေချာချာ နဲ့ မြန်မြန်ဆန်ဆန်သုံးသပ် ချမှတ်ဖို့လိုနေပါပြီ။
ပြဿနာတခုဖြစ်လာမှ နောက်ကလိုက်ပြီး စည်းကမ်းချ နဲ့
ဆန်စင်ရာ ကျည်ပွေ့လိုက်ထောင်းတဲ့ ကသောင်းကနင်း တပွဲတိုးမူဝါဒတွေပဲ
အခြား…. အခြား…. + + +
ဒါတွေကြည့်ရင် အခုထိ မြေစမ်းခရမ်းပျိုးတုန်းလို့ ကောက်ချက်ချရပါတယ်။
လက်တွေ့နယ်ပယ်မှာ အခက်အခဲတွေ အများအပြားရှိလာမှ ပြန်ပြန်ပြင်နေရပါတယ်။
အချဉ်မှန်းလူသိပြီး အပြင်ကလူလည်တွေ လာလှီးသွားတာ ခံရဘို့တောင်များတယ်။
ကျွန်တော်တို့မလုပ်တတ်ရင်တော့ သူများအတွက် အချိန်ကောင်း… များဖြစ်သွားမလားနော်။
မြန်မာတွေ ဆိုတော့ အနော်တို့ လဲ မြေစမ်းခရမ်းပျိုးနေရလေ၏။နေ့ တဓူဝ စားဖို့ အရေး၊ဟိုအရေးသည်အရေး
များကပိုအရေးကြီးနေလေသည်။ကျနော်ကတော့ မူဝါဒတွေထက် လက်ရှိလူတွေထဲက စစ်အစိုးရ ရဲ့လက်ကျန်
အဆင်းရဲ့ဆုံး ငမွဲ နိုင်ငံအဖြစ်မှ လွတ်ကင်းအောင် ချမ်းသာ တဲ့ မြန်မာနိုင်ငံ၏ အကျင့်ပျက် တာဝန်ရှိသူ များနှင့် စီးပွားရေးလက်ဝါးကြီးအုပ်ဝိသမလောဘ သမား များ ကိုရှင်းထုတ်ပါ လို့ဘဲ တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်။
ဒါကိုမလုပ်ရင်.. တကယ့်စေတနာရှိတဲ့.. ငွေရှင်တွေက.. လာမြုတ်နှံလို့ မရဘူးလေ..။
တလောက ဦးရွှေမန်း အင်္ဂလန်ပါလီမန်အကြောင်းလေ့လာချင်တယ် အင်္ဂလန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးကို ပြောလိုက်တာ ဖတ်လိုက်ရတယ်.. အစိုးရနဲ့..ဥပဒေပြုသူတွေ နိုင်ငံတာကာတန်းအသိအမြင်ကြွယ်ဖို့လည်း အင်မတန်အရေးကြီးပါတယ်..။ ပညာတော်သင်တွေ ကို.. အနောက်နိုင်ငံက. ဆန်ရှင်လျှော့/ဖြုတ်ပေးလိုက်တဲ့.. နိုင်ငံတွေဆီ.. တောင်းဆိုပြီး.. တောက်လျှောက်လွှတ်သင့်တယ်..
ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးရအောင်လုပ်ယူရင်း.. ကုန်ထုတ်လုပ်မှုမရှိနိုင်တဲ့.. စစ်သားတွေကိုလည်း.. ကုလသမဂ္ဂငြိမ်းချမ်းရေးတပ်ထဲပို့ပြီး.. အဖတိုင်းပြည်အတွက်ငွေရှာသူတွေဖြစ်အောင် လုပ်သင့်တယ်..။ ဒါကိုလည်း.. (အမှတ်မမှားရင်) ယူအက်စ်စိနိတ်တာ မက်ခ်ကိန်းပြောသွားခဲ့တာ…။
ပြည့်ဘဏ္ဍာ..ငွေကြေးအကုန်အကျရှိစေ/နေတဲ့.. ရုရှားပညာတော်သင်စစ်သားတွေပြန်ခေါ်ပြီး ငွေမပေးရတဲ့.. ယူအက်စ်စစ်သင်တန်းကျောင်းတွေဆီ.. လွှဲပြောင်းနိုင်ရင်တော့.. အကောင်းဆုံးပေါ့..။ ၀က်စ်ပွိုင့်ကို မြန်မာထဲကဘယ်သူ.အရင်ဆုံး.ပြန်လာမလည်း.. သိချင်သား..။
တိုင်းပြည်ကို အင်မတန်ဝန်ပိစေတဲ့.. စစ်စရိတ်တွေ စစ်ဘက်ဂျက်တွေ လျှော့ချဖို့ ..ဘက်ဂျက်ကပ်တွေ..အရင်. လုပ်ရမယ်ထင်မိပါတယ်..။
လက်ညှိုးလေးတွေထိုးပြီး သူများကို အပြစ်ပုံတတ်တဲ့ အကျင့်၊
တာဝန် ကို ဘော်လီဘော ပုတ်တတ်တဲ့ အကျင့်၊
ကိုယ့်တစ်ဘို့ ထဲကိုသာ ကြည့်တတ်တဲ့ အကျင့်
စသဖြင့် ခေါက်ရိုးကျိုးနေတဲ့ အကျင့်ပေါင်းများစွာ ကို ရေမျှောချိန် ရောက်ပါပြီ။
နိုင်ငံတခုရဲံ စီးပွားရေး အခြေခိုင်မာရေးမှာ GDP လို့ခေါ်တဲ့ ဒီနေ့ထိမရိုးနိုင် indicator ကို ကိုင်စွဲနေကြရတုံးပါဘဲ။ တခြားindicators တွေတော့ ရှိသပေါ့နော်။ အဲ့ဒီအခြေရောက်ဖို့ မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့လတ်တလောနဲ့ရေရှည်လိုနေတာက foreign direct investment နဲ့ transfer of technology ပါ။ မှန်ပါတယ် ၁၉၉၁ (အမှန်တကယ်တော့ ၁၉၉၁ နောက်ပိုင်းမှပါ) နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဥပဒေ အရ ရောက်လာကြသမျှကုန်သော စီးပွားရေးသမားများဟာ (အားလုံးလိုလို) ပွဲစားများဖြစ်ပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲ။ ရှင်းပါတယ်။ မြန်မာစီးပွားရေးနဲ့ ငွေကြေးခိုင်မာမှု၊ နိုင်ငံရဲ့အုပ်ချုပ်မှုစ့နစ်ပေါ်သံသယ ရှိမှုတို့ကြောင့် တကယ် ရင်းနှီမြှုပ်နှံမဲ့သူတွေက မ၀င်ခဲ့ကြပါဘူး။ န၀တခေတ်ဝန်ကြီးမင်းများ ဗိုလ်ချုပ်တွေတော်တော်များများလဲ နားလှည့်ပါးရိုက်ခံလိုက်ကြရတာတွေရှိပါတယ်။ တွေ့တုံးကတော့ ရွှမ်းရွှမ်းဝေ ပြီး နေ့ချင်းညချင်းဘဲ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေဝင်လာမလိုနဲ့ နောက်ကာလကြာလာသည်နဲ့အမျှ ဇာတိရုပ်တွေပေါ်လာပါတယ်။ ပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့ စီးပွားရေးသမားတော်တော်များများကလဲ စီးပွားရေးအရေခြုံ သဘောသဘာဝကို ၀,တလုံးတောင်နားမလည်ကြသူတွေဖြစ်နေကြပါတယ်။
ခု လက်ရှိအစိုးရက ပြည်ပနေပညာရှင် နဲ့ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင်ပညာတတ်များကိုဖိတ်တဲ့အချိန်မှာလည်း အုတ်အရောရောကျောက်အရောရော တွေပါလာနေသေးတာကို အတိုင်းသားတွေ့ရဆဲကြားရဆဲပါ။ဦးရာလူဝင်နေတဲ့အချိန်အခါကြီးပေါ့။ လက်ရှိဝန်ကြီးမင်းများကိုယ်တိုင် ပြည်ပကမြန်မာတွေကိုတွေ့ရဘို့ဝန်လေးနေတဲ့အကြောင်း ကြားနေရပါတယ်။ ဒီကြားထဲမှာ ဒေါ်စုကိုလဲ ၀င်လုံးကြဘို့ကြိုးစားကြသူတွေ လူစွမ်းကောင်းတွေပေါ်နေပြီဖြစ်ကြောင်းလဲ ကြားရပြန်ရောခင်ဗျ။
တကယ်စိတ်စေတနာရှိသူတွေ၊ ပညာတတ်ပြီးလုပ်ပေးနိုင်သူတွေ လဲ ပြည်ပရောက်မြန်မာတွေထဲအများကြီးရှီပါတယ်။
ခုချိန်ကတော့ ဒီလိုလူမျိုးတွေကလဲအားစမ်းတဲ့အချိန်၊ အစိုးရကလဲ ခြေလှမ်းတွေစောင့်ကြည်တဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်။
ဆိုခဲ့သလို – တကယ်လုပ်နိုင်ကြသူတွေက မိမိတို့ ပိုင်ရာဆိုင်ရာ စီးပွားရေး၊ နည်းပညာ နဲ့ တကယ့် DIRECT ရင်းနှီးမြှုပ်နှံအမှုပေးနိုင်မဲ့ နည်းလမ်းကို ဖေါ်ထုတ်ပေးနိုင်မဲ့ သူတွေ (၀ါ) ပွဲစားတွေလိုပါတယ်။ တစ်ပွဲဘဲစားတဲ့ ပွဲစားတွေ ခြေရှုပ်ရတော့မဲ့အချိန် မဟုတ်တော့ပါဘူး။ နံမယ်လေးရ ရှေ့တန်းလေးထွက်ပြီး ပေါ်ပြူလာဖြစ်ယုံ လုပ်ရမဲ့သူမျိုးတွေကို ဝေးဝေးကရှောင်နိုင်ကြဘို့လိုပါတယ်။ ဒီလိုလူမျိုးတွေကတော့ ၀ါသနာဖျောက်နိုင်ကြမယ်မထင်ကြောင်းပါ။
ကိုဖက်ခင်ဗျား – အချိန်အခါကတော့ အလွန်ကောင်းလို့ အစိုးရကလဲ လိုအပ်ချက်တွေကိုအမြန်လုပ်နိုင်တဲ့အချိန်၊ ပညာတတ်စီးပွားရေးပညာရှင် (တစ်ပွဲစားများမပါ) တွေလဲ နိုင်ငံတကာမှာ အတော်ကြီးအောင်မြင်နေကြသူတွေရှိချိန်၊ ဒီလိုအချိန်မှာတော့…လုပ်စရာတွေတပုံကြီးပါနော်…………………………………….
စစ်တပ်အပေါ် အများကြီး မူတည်ပါတယ်။ သူတို့ဘယ်လမ်းရွေးမှာလဲ…စစ်တပ်ကောင်းစားရေးနဲ့ တိုင်းပြည်ကြီးပွားရေး နှစ်ခုထဲက တခုခုကို အပြတ်ရွေးရပါမယ်။ မြန်မာပြည်မှာ အခြေအနေများကောင်းနေပြီလို့ ပြောရန်စောလွန်းပါသေးတယ်။ အတိတ်မှာလည်း ၁၉၆၄ခုနှစ်တုန်းက ဒီလိုပဲ ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲများ ခြိမ့်ခြိမ့်သဲ ကျင်းပပြီး မအောင်မြင်တဲ့အခါ နိုင်ငံရေးသမားအားလုံး ထောင်ထဲဝင်ရ၊ လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များနဲ့ ပြန်ချခဲ့တာ ရှိခဲ့ဖူးပါတယ်။ အကျိုးရှိနိုင်မယ့် နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနဲ့ နည်းပညာများ ဝင်ရောက်လာစေချင်ရင် စစ်တပိုင်းအစိုးရအနေနဲ့ အများကြီး လုပ်ပြရပါအုံးမယ်။ အခုအချိန်အထိတော့ အားလုံးက လေစားလေလျော်အဆင့်ပဲ ရှိပါသေးတယ်ခင်ဗျား။။။။
တိုးတက်လာပြီတော့မဆိုနိုင်သေးပေမဲ့ တိုးတက်မယ့်အရိပ်ယောင်တော့မြင်နေ ရပါပြီ။ အာရုဏ်ဦး နေခြည်သမ်းလာပြီလို့ဆိုရမှာပေါ့။
အဲဒါတော့ ဟုတ်တယ် ဦးဖက်ရေ
ဦးဖက်ပြောမှ အတွေ့ကြုံတစ်ခုထပ်တိုးတယ် 10000 ပေးရင် တံဆိပ်တုံးထုပေးတယ်တဲ့ ကောင်းရော
ဦးဖက်ရေ သူတို့ လာရင်းနှီးဖို့ကြိုးစားသင့်သလို သူတို့မလာခင်ကတည်းက အလုပ်သမားအခွင့်ရေး
ကိုလည်း အမှန်အကန် ပြဌာန်းထားသင့်တယ်လို့ထင်တယ်ဗျာ
အခုလည်းကြည့်လေ ကိုးရီးယားနဲ့ဂျပန်တွေက အထည်ချုပ်တွေများ ပြည်တွင်းလာလုပ်နေပြီး ကျနော်တို့မြန်မာ့ အထည်ချုပ်အတတ်ပညာရှင်တွေကို အချိန်အနည်းဆုံး တစ်နေ့ 10 နာရီလောက်ခိုင်းပြီး လစာကျတော့ သူတို့နိုင်ငံမှာပေးရသလောက်ရဲ့ အစွန်းထွက်လောက်ရှိတဲ့ 40000 နဲ့ 50000 လောက်ပဲပေးနေတယ် တစ်ချို့ဆို တစ်နေ့ကို 12 နာရီလောက်ထိကိုလုပ်နေကြရတယ်
ဒီနိုင်ငံမို့ရတာလေ သူတို့နိုင်ငံဆိုရင် အချိန်ပိုလုပ်ခိုင်းတာနဲ့ အချိန်ပိုကြေးတွေဘာတွေလာရမှာမို့ ဒီကိုလာရင်းနှီးတာ
ကို ရွှေဘိုသား ရေ
အဘ ” စဉ်းစားကြစေလိုပါတယ် ( ၆ ) ” မှာ
နဲနဲ တို့ထိထားပါတယ် ။
ကိုဖက် ရေ၊ အားလုံးကတော့သမ္မတကြီးကိုကောင်းချီးသြောဘာတွေပေးကြ၊
အမေစုပြောတာတွေမှတ်မိတာထူးထူးခြားခြားကတော့ Rule of Law, တရားဥပဒေရှိရအောင်၊
အရေးအခင်း၊အမေရိကားမှာ ၁၉၇၀ နှစ်များကဖြစ်သွားပါတယ်။ သမ္မတ နစ်ဆင် Richard Nixon က
သူဒီခိုးပြီးနားထောင်တဲ့ဓါတ်ပြားများကိုမသိရပါဘူးဆိုတဲ့လိမ်ပြောမှုနဲ့နောက်ဆုံး Presidental impeachment လို့ခေါ်တဲ့ဥပဒေနဲ့အရှက်တကွဲရာထူးကနှုတ်ထွက်သွားရတယ်။
ဒီသတင်းလဲကြားရော တရုပ်ဥက္ကဌကြီးမော်စီတုံးကနားမလည်နိုင်ဘူးတဲ့။ လိမ်တာကတရုပ်နိုင်ငံခေါင်းဆောင်အတွက်ကထမင်းစားရေသောက်၊လူတွေတောင်သတ်သေးတာ။
တရားဥပဒေရှိမှမတရားလုပ်ထားတဲ့၂၀၀၈အခြေခံဥပဒေနဲ့အခုနောက်ဆုံးပုဒ်မ၄၀၁ နဲ့ လွှတ်လိုက်တဲံ
Business ethnics, accountability, transperancy, environmental policy ဒါတွေရှိလာရင်
ဆင်းရဲသားနယ်စပ်ကတိုင်းရင်းသားတွေကိုတောင်မှလေးလေးစားစားဆက်ဆံလာမယ်။ လုထုဆီကဆန္ဒခံယူပြီးမှလုပ်ချင်တဲ့ New Developments, Projects တွေကိုလုပ်လာနိုင်မယ်။
ဌာနေလူထုအတွက်ဘာအကျိုးကျေးဇူးရှိနိုင်လဲ၊ Environmental impact studies တွေရှိလာနိုင်မယ်။
ဟုတ်လို့လား ဦးတင်မိုသီရဲ့..တရုတ်ကြီးက အမေရိကန်နဲ့ ဥရောပတိုက်ကို အကြွေးနဲ့ သိမ်းတော့မယ်လို့ ထင်နေတဲ့သူတွေ ရွာထဲမှာရှိတယ်။ တရုတ်ကြီးက သိပ်ကောင်းဆိုပဲ…..ဟဲဟဲ….။
timothy ပျောက်နေတာအတော်ကြာပြီနော် …
မှန်ပါတယ် တရားဥပဒေ စိုးမိုးရေး အားလုံးတပြေးညီဖြစ်ရေး .. အတော်တော့မလွယ်တဲ့ကိစ္စပါ
အာဏာရှိလူကြီးတွေမှာ အရိုးစွဲနေပါပြီ သူတို့ကဥပဒေအထက်ကဆိုတဲ့အယူအဆကိုပါ ..။
ဖမ်းလိုက်ရင်လဲ အဆင့်ဆင့်ဖုန်းဆက်ပြီးပြီးသွားတာပါဘဲ … အဲဒါတွေကအစပြင်ကြရမှာပါ ..။
အင်း… ဘာလုပ်ကြမလဲဆိုတော့ ဘာလုပ်ရမှန်းကို မခန့်မှန်းနိုင်သေးဘူး။ နည်းနည်းအခြေအနေကောင်းလာတယ်ဆိုပေမယ့် စီးပွားရေးကတော့ တိုးတက်မလာသေးသလို အခွန်အခတွေကတော့ တိုးမြှင့်ကောက်ခံနေပြီ။ ဘယ်နေရာကနေ ဘယ်လိုတွေ စပြောင်းမလဲပဲ အရင်စောင့်ကြည့်ရနေမှာပဲ။ ဘာမှမလုပ်သေးပဲလေ… ခုလောလောဆယ်တော့ လေးဖက် ဘာလုပ်ရင်ကောင်းမလဲဆိုတော့ လေးဖက် မုန့်ကျွေးမယ့်အချိန်ကိုစောင့်နေတာပါပဲ။